သံတောင်ချောင်းမှ လွမ်းချင်းရှည် | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » သံတောင်ချောင်းမှ လွမ်းချင်းရှည်
Posted by မောင်ရိုး on Mar 26, 2014 in Creative Writing, Travel | 34 comments
ဒီနေရာလေးအကြောင်းကို ကိုနိုဇိုမိ (မန္တလေးဂဇက်) က လွန်ခဲ့သော ၂ နှစ်ခန့်က ဓတ်သေတွေဝေဝေဆာဆာနဲ့ တင်ဖူးပါတယ် ။ေ
အခု ကျနော်ကတော့ ရောက်ခဲ့စဉ်အမှတ်တရအနေနဲ့သာ ပြောရခြင်းပါ ။
ကိုနိုဇိုကတော့ ပိုမိုပြည့်စုံပါတယ် ။
တောင်ငူမြို့ရဲ့ အရှေ့ဖက်ကိုထွက်လိုက်ပြီဆိုရင်ပဲ ၁၃ မိုင်အကွာ ကရင်ပြည်နယ်ထဲမှာ သံတောင်မြို့ဆိုတဲ့ တောင်ကုန်းပေါ်ကမြို့လေးကိုရောက်သွားမှာပါ ။
ပခူးတိုင်းရဲ့အဆုံး ကရင်ပြည်နယ်ရဲ့အစနယ်နမိတ်စည်းနားက မြို့လေးပဲဆိုပါတော့ ။
မြို့ဆိုပေမယ့် ဖွံ့ဖြိုးမှုအားနည်းတဲ့ (ဃ) အဆင့်မြို့လို့ဆိုရမလားမပြောတတ် … ရွာကြီးတစ်ခုသာသာပါပဲ။ ဒါပေမယ့် အဲဒီနေရာမှာ အမောပြေလန်းဆန်းပြီး သောကတွေငြိမ်းစေမယ့် တောင်ကျချောင်းလေးတစ်ခု စီးဆင်းလို့နေခဲ့ပါတယ် ။
အရှေ့ရိုးမတောင်တန်းကြီးရဲ့ တောင်ကုန်းတောင်တန်းတွေရဲ့အနားသပ် ဖြစ်နေလေတော့ ကုန်းမြေမြင့်ပေါ်က အိုအေစစ်လေး လို့ တင်စားပါရစေ ။
ပသိချောင်း လို့လဲ ခေါ်ကြပါတယ် ။ အရှေ့ရိုးမရဲ့ တစ်နေရာရာက စီးဆင်းလာတဲ့ စမ်းရေအေးတွေတသွင်သွင်စီးလို့ပေါ့ ။
ကျောက်တုံးကြီးတွေကြားက ဖြတ်တိုက်စီးဆင်းလာတဲ့ စမ်းရေကျသံလေးတွေဟာလဲ တောရိပ်တောင်ရိပ်မှာ ကျေးလက်ဂီတသံလိုပါပဲ ။
ရောက်ခါစမှာ ရေထဲဆင်းဖို့ဝန်လေးကြပေမယ့် … ကြည်လင်အေးမြနေတဲ့စမ်းရေအေးတွေရယ် ၊ စည်းချက်ကျကျကြားနေရတဲ့ ပသိချောင်းရဲ့ရေကျသံတွေဟာ
တစ်ခါလောက်တော့ ရေထဲဆင်းချင်စိတ် ဖြစ်မိစေခဲ့ပါတယ် …
စမ်းရေရဲ့အထိအတွေ့ … လေနုအေးရဲ့ အပွေ့အဖက်မှာ အမောတွေပြေ ၊ စိတ်ကြည်လင်လန်းဆန်းလို့ လွမ်းစရာတွေတောင် ပျောက်ခဲ့ပါရဲ့ ………
ကျနော် ပထမဆုံးအကြိမ်ရောက်ခဲ့ဖူးတာက ၁၉၈၅ ဝန်းကျင်လောက်ကပါ ။ အပူဆုံးအချိန်လို့ပြောလို့ရတဲ့
ကဆုန်လပြည့်နေ့မှာပေါ့ ။ အဲဒီတုန်းက ချောင်းရေက အတော်လေးနက်ပါသေးတယ် ။ တချို့နေရာမှာ လူတစ်ရပ်မက
နက်တဲ့အတွက် ကလေးများ နဲ့ရေမကူးတတ်သူတွေ မဆင်းဖို့ သတိပေးကြရတာပေါ့ ။ ချောင်းရဲ့အထက်ဖက်ကိုဆက်သွားတယ်ဆိုရင်ပဲ
ကျောက်တုံးတွေအဆင့်ဆင့်ခံပြီး ရေတွေစီးကျနေတဲ့ ရေတံခွန်အငယ်စားလေးလဲ တွေ့ရမှာပါ ။
ချောင်းလေးကို ဖြတ်ကျော်ပြီး တောင်ကုန်းကြားက ယာတောစခန်းကိုသွားဖို့ ကြိုးတံတားတစ်ခုလည်း သွယ်တန်းပြီး
လူငယ်ပေါက်စတို့ဘာသာဘာဝ ရေဆင်းစိမ်လိုက် ၊ တံတားလေးပေါ်တက်လိုက်၊ ကျောက်တုန်းတွေကြားမှာ
ပြေးလိုက်ဆော့လိုက်နဲ့ ပျော်ခဲ့ဖူးလေရဲ့ ။ ချောင်းဘေးက ဘုန်းကြီးကျောင်းဝန်းထဲကစေတီလေးနဘေးမှာစုရပ်လုပ်ပြီး
ကျနော်တို့ ထမင်းထုတ်တွေဖြေစားကြဖူးတယ် ။ စေတီလေးကတော့ ညဏ်တော်မမြင့်လှပါဘူး ။ တည်ထားတာက
အမှတ်မမှားရင် သကာရည်တို့ ထုံးတို့နဲ့ အုတ်ကိုစည်ပါသတဲ့ ။ ဘိလပ်မြေမပါပဲ ရှေးရိုးနည်းနဲ့တည်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ် ။
မကြာသေးမှီကပဲ တောင်ငူကို အကြောင်းတစ်ခုနဲ့ရောက်သွားတော့
ခြေရာဟောင်းတွေပြန်ရှာ ချင်မိပြန်ရော ……
ဒီလိုနဲ့ပဲ တောင်ငူ -ထန်းတပင် လမ်းပေါ်က မြတ်စောညီနောင်ဘုရားရယ် ပြီးတော့ သံတောင်လေး လို့ခေါ်တဲ့
တောင်ငူ – သံတောင်ကြီး ကားလမ်းပေါ်က ပသိချောင်းကို ခြေဦးလှည့်ခဲ့မိတယ်လေ ။
သွားတဲ့အချိန်က ပွဲတော်ရက် မဟုတ်လို့ မိသားစု သုံးလေးစုလောက်သာရှိကြတာပေါ့ ။ သင်္ကြန်ရက်တွေနဲ့
ပွဲတော်ရက်တွေ ပိတ်ရက်တွေဆိုရင် ခြေချဖို့တောင်မလွယ်တဲ့နေရာပါ ။ တောင်ငူ တစ်ဝိုက် မိုင်သုံးလေးဆယ်ကျော်လောက်က တကူးတက လာကြတဲ့နေရာလေးပါပဲ ။
ကျနော်တို့ရောက်တဲ့အချိန်က မတ်လဆန်းပါ ။ သိပ်မပူသေးသလို ရေလည်း သိပ်မနဲလောက်သေးဘူး ။ ဒါပေမယ့် တကယ်ရောက်သွားတော့
တွေ့ရတဲ့ မြင်ကွင်းနဲ့အခြေအနေကိုကြည့်ပြီး စိတ်မကောင်းဖြစ်မိပါရဲ့ ။ တကယ်ဆိုရင် ပုံထဲက ကျောက်တုံးကြီးတွေဟာ
တစ်ဝက်လောက်ပဲ ပေါ်နေတတ်တာ ။ အခုတော့ နှစ်ပေါင်း သုံးဆယ်နီးပါး အတွင်းမှာ အရိုးပြိုင်းပြိုင်းထပြီး ပြောင်းလဲသွားပါပြီ ။
တောင်ပေါ်ကကျလာတဲ့ရေတွေဟာလည်း အားအင်ကုန်ခန်းပြီးမောပန်းနေသလိုပါပဲ ။
တွေ့ခဲ့ဖူးတဲ့ရေတံခွန်လည်း ဘယ်ပျောက်သွားလည်းမသိ ။ သြော် .…… တောင်ငူသူ တောင်ငူသားတွေရဲ့အမှတ်တရနေရာ …
ဧည့်သည်လေးများလာရင် တကူးတက လိုက်ပို့ပေးကြတဲ့နေရာ ………
နွေရာသီရဲ့ ပူပြင်းမှုကို တွန်းလှန်ကျော်ဖြတ်ပြီး အေးမြငြိမ်းချမ်းစေတဲ့ တစ်ခုတည်းသောနေရာ ……
အခုတော့ ……… အရာရာတွေပြောင်းလဲခဲ့ပါပြီ ။
မပြောင်းလဲတာကတော့ မဖွံ့ဖြိုးတဲ့ လူမှုဘဝ အခြေအနေတွေရယ် ၊ ဆင်းရဲနွမ်းပါးပြီး
အလုပ်အကိုင်ရှားပါတာတွေရယ် ပြီးတော့ …………
ချစ်စရာကောင်းတဲ့ ဒေသခံတွေရဲ့ဖေါ်ရွေမှုနဲ့ ပကတိရိုးသားမှုတွေပါပဲလေ …… ။
နရစ်တော့ သံတောင်ချောင်း ရေ …………
တချိန်က လူတစ်ရပ်မြုတ်တဲ့နေရာမှာ ခါးလယ်လောက်ရေရှိနေသေးတာကိုပဲ
ဒီလောက် တောတွေခုတ် တောင်တွေဖြိုတဲ့ခေတ်မှာ ရေတွေစီးဆင်းပေးနိုင်အောင် အံတုပေးနိုင်တဲ့
မင်းရဲ့သတ္တိ ကို လေးလေးစားစားဦးညွှတ်သွားပါတယ် …… ။
နေပြည်တော်မှာ အပန်းဖြေစခန်းတွေပေါ်လာလို့ မင်းဆီကို လူတွေအလာကျဲသွားပေမယ့်
မပြုမပြင်ရသေးတဲ့ သဘာဝစစ်စစ်ကို ခံစားချင်သူတွေကတော့ မင်းဆီကို လာနေဦးမှာပါလေ ……
ငါတို့ခြေရာတွေမရှိတော့ပေမယ့် …ငါတို့ရဲ့အမှတ်တရတွေကို သိမ်းဆည်းပေးထားတဲ့နေရာ ……
ငါတို့ အမြဲမရောက်နိုင်ပေမယ့် … … ရင်ထဲမှာထာဝရ ရှိနေတဲ့နေရာ ……
အဲဒီနေရာလေးကို မင်း …အမြဲထိမ်းသိမ်းပေးပါလေ ……
အမြဲတန်း အမြဲတန်းးးး ဆက်လက်စီးဆင်းနေပေးပါ ပသိချောင်း ရေ …………………။
ပုံ ၃ မှာ မက်မှန်လေး ဒိုင်ဗင်ထိုးတော့မယ်။
ဒီလောက်ဝါးတားတားဖြစ်နေတာလဲ မှတ်မိတယ် ဟုတ်
သများ မျက်စိမှုန်တာ သိသားနဲ့။
ဇော်ဝင်းထွဋ်နဲ့ အီတိုးလေး လာရင် အီတိုးလေး ပဲ မြင်တာ။
မသော်( နန်းတော်ရာသူ) ကိုချောဆွဲဗျို့ ………
အဲဒီနယ်က သူတို့နယ်ဗျ ။ သိပ်ပိုင်တယ်
အဲဒီနဲ့ သိပ်မဝေးတဲ့နေရာမှာတော့ တောဂျီသားကင်နဲ့ ၀ီစကီ ဧည့်ခံဖူးတဲ့သူရှိလို့ သောက်ခဲ့ဘူးတယ်၊ စသောက်တုန်းကတော့ သောက်စားပြီးရင် အဲဒီကိုသွားကြမယ်ပေါ့ ဒါပေမယ့် မရောက်ဖြစ်လိုက်ဘူးဗျာ။
ဦးခလည်းဟနယ်အတော်စုံသားဗျ နော …
စိတ်ဝင်စားရင် နေ့ချင်းပြန် ရသနော ဟဲဟဲ
ရောက် ဘူး တယ်
အေး ချမ်း နေ တာ ဘဲ
ခု တော့ ပြောင်း လဲ ကုန် ပြီ ပေါ့
အစ်မတို့ သွားဖူးတဲ့အချိန်လိုတော့ မဟုတ်တော့ပေမယ့် 
အူးလေး ပသိချောင်းက ၁၃မိုင်ခေါ်သပေါ့ သံတောင်ကို ရောက်ဖို့ နောက်ထပ်တောင်ပေါ် ၁၄မိုင်ဆက်သွားရတယ်။ ဒါကတစ်ချက်
ဒုတိယတစ်ချက်က ပသိချောင်း လမ်းခွဲကနေ အရှေ့တောင်ဘက်အတိုင်း တည့်တည့်သွား ၁၃မိုင်လောက်ဆို သံလွင်မြစ်နဲ့ သောက်ရေခပ်ချောင်း ဆုံရာက မြတ်စောညီနောင်ဘုရား (ဦးသန်းရွှေနဲ့ ဒေါ်ကြိုင်ကြိုင် ယတြာအသည်းအသန်ချေကြသေး) သမိုင်းနောက်ခံနဲ့ ဒေသတွင်း ထူးခြားထင်ရှားတဲ့ ဘုရားပေါ့။
တောင်ငူကနေ ၃မိုင်ခွဲလောက် သံတောင်ကိုတက်လာရင် လမ်းဖြတ်တခုရှိတယ်၊ အဲ့ဒါ လိပ်သို-ရာဒိုလမ်း ၁၂၂မိုင်လားမသိ၊ အဲ့လမ်းရောက်ရင် တောင်ဘက် ရာထိုသွားတဲ့ဘက် ၄မိုင်မှာ ရေစီးကောင်းပီး အတန်ငယ်ကျဉ်းတဲ့ ချောင်းတခု၊ တပ်အဟောင်းတခုရှိတယ်။ ကြားစခန်းခေါ်လားပဲ၊ အဲ့မှာ အင်္ကျီအဝတ်အစား အပိုမရှိလို့ သင်တန်းသားတွေ အကုန်လုံး -င်တုံးလုံးနဲ့ ရေကူးဖူးပါကြောင်း။
ဘဝမှာ မှတ်မှတ်ရရ သင်တန်းတပါတ်စဉ်ထဲ ဗရုတ်တကောင်၏ ကျွတ်ငပိထောင်းနဲ့ ပိန္ဓဲကွင်းပြုတ် ထမင်း၃ပန်းကန် လွေးဖူးပါကြောင်း(အကုန်ပြန်အန်ထွက်)
ဒါပေသိ ဒေးမူလေးတွေ ရိုးသားပီး ချောချက်က ၉လောက်ချိတယ်
ကိုရဲစည် ပြောတဲ့သံတောင်ကြီးက်ု ၂၀၀၀ လောက်က ချောဆွဲခံရလို့ ပါသွားဖူးတယ် ။
အဲဒီမှာ အရာရှိတွေမွန်းမံသင်တန်းလားမသိ ဖွင့်တုန်းကပေါ့
ပြန်လာတော့ ကလပ်ပလိတ် တစ်ချပ်လဲလိုက်ရတယ်
အခုလဲ မြတ်စောညီနောင်ဘုရားမှာအရာရှိတစ်ဖွဲ့နဲ့ဆုံကြသေးတယ်။ အောက်ပတ်စ် ထွက်လာတာထင်ရဲ့
ရောက်ဖူးချင်သား. . .
သွားဖို့ လွယ်ပါတယ် ။ သွားပါများခရီးရောက် တဲ့
သံတောင်ကြီးမှာ နွေရာသီ ဘာသာရေးဆိုင်ရာသင်တန်းရှိမယ်ထင်တယ်နော
လိပ်သိုနဲ့သံတောင်ကြီး သုံးလေးခါရောက်ဖူးတယ်.. အဲ့ချောင်းတော့မရောက်ခဲ့ဘူး.. အဲဒီဖက်တွေသွားတိုင်းလည်းပျော်တယ်.. ရောက်ပြီးသားနေရာပေမယ့် ထပ်သွားချင်သေးတယ်..
သံတောင်ကို မရောက်ဘူးပါဘူး.. ရှမ်းဝတီးမှာနေတုန်း သံတောင်မှာ တိုက်ပွဲဖြစ်နေတော့ လက်နက်ကြီးသံတွေပါ ကြားရတာ..။
ကြီးကြီးက သံတောင်ကို ပေးမသွားဘူးဗျ…ကြာပါပြီ.
အဲဒီအချိန်တုန်းက သံတောင်ကြီးကို သွားတဲ့လိုင်းကားမရှီသလိုသွားထို့လဲမလွယ်လှဘူး
ဘောဂလိ ဘောဂလ ကထွက်တဲ့ ချဉ်ပေါင်ဖါလာတောင်မှ ခက်ခက်ခဲခဲ တောင်ငူကိုပို့ရတာ။
ဟိုတုန်းက အများပြည်သူတွေသွာလားရင် အခုတွေ့ရတဲ့ ၁၃ မိုင်သံတောင်လေး ကိုပဲသွားကြရတာ ။
တကယ်တော့ ဒါက ဘာမှမဟုတ်သေးတဲ့ ဒေသတွင်း မထင်မရှားနေရာလေးပါ
နိုင်ငံတကာသိအောင်မလုပ်နိုင် ကြတာတွေ များသားဗျာ
လိုက် ပို့ မေ ပး ရင် ခင် ဗျား နဲ့ ကျ နော်
ဒန် ဒန် ဒန် ဘဲ
အတည်ပြော မယ်ေ နာ်
ကျ နော် တို့ နိုင်ငံ က သဘာ ၀ ကို ပြ ပြီး
နိုင် ငံ ခြား သားလာ အောင် မ ဖန် တီး တတ် သေး ဘူး ဗျို့
လေးပေါက်ရေ ..အဲ့ဒီ့ ချောင်း နေရာကိုကတော့ ဦးခင်မောင်အေး စီဘီဘဏ် က တော့ သိမ်းပိုက်ထားပြီးပါပြီ ။
အဲ့ဒီ့ နေရာထက် ဂျပန် တွေ စိတ်ဝင်စားတာက သူတို့လူမျိုးတွေ စစ်အတွင်းကျခဲ့တဲ့ နေရာရှိတယ် ။ ကျွန်တော်လည်း နေရာ သေချာတော့မသိပေမဲ့ ဂျပန်တွေအရမ်းသွားချင်တယ် ။
သို့သော်လည်း နယ်မြေ မအေးချမ်းဘူးဆိုပြီး တောင်ငူ အထွက် တံတားတောင် ပေးမကျော်ဘူး ။
ဂျပန်တွေ ကလည်း လစ်ရင်လစ်သလို သွားကြတယ် ။ ရလဒ်ကတော့ ဟိုတယ် သမား အထောင်းခံရတာဘဲ ။ သူတို့ဟာ သူတို့ သွားချင်ရာသွားတာ ဟိုတယ် သမားက ဘယ်လိုတားမှာလဲ ။ ဆိုင်ရာပိုင်ရာတွေက ဒါတွေ နားမလည်ဘူး ။ နိုင်ငံခြားသား သွားတာတွေ့ရင် ဘယ်ဟိုတယ် တည်းလဲ ..အဲ့ဒီဟိုတယ်ကိုပြသနာရှာတော့တာဘဲ ။။
နိုင်ငံခြားသားကို သံတောင် အထွက် တံတား အကျော်မခံဘူး ။
အခုနောက်ပိုင်းတော့ မသိတော့ဘူး။ သွားမရဘူးဆိုတော့ ဘယ်သူမှ မလာတော့ဘူးလေ ။
မရောက်ဖူးသေးလို့ တစ်ခေါက်လောက်တော့ သွားအုန်းမယ် …
နေ့ခြင်းပြန်သွားလို့ အဆင်ပြေရင် စီစဉ်ကြည့်မယ် ..
တန်ဆောင်မုန်းလလောက်ဆို အကောင်းဆုံးဖြစ်မယ်ထင်တယ်နော် …
နေ့ချင်းပြန်မှီပါတယ် ။ ရန်ကုန်က မနက်၆ နာရီထွက်ရင် တောင်ငူကို ၁၀ နာရီလောက်ရောက်ပါတယ် ( ကီလို ၁၀၀ ဝန်းကျင်မောင်း )
ဟိုဖက်ကို ၁၃ မိုင်သာမောင်းရလို့ နာရီဝက်ပါပဲ ။
နေ့လည်စာ ဝယ်သွားပြီး ချောင်းဘေးမှာစား .… နေ့လည် ၂ နာရီလောက်ပြန်ထွက်ရင်
မိုးမချုပ်မှီ ရန်ကုန်ပြန်ရောက်ပါလိမ့်မယ် ။
တစ်ညလောက်အိပ်နိုင်မယ်ဆိုရင်တော့ တန်ဆောင်မုန်းလပြည့်နေ့ညမှာ နှစ်ကျိတ်ရှစ်ဆူပွဲရှိပါတယ် ။
မိုးလင်းပေါက် လှည့်လည် အပူဇော်ခံ ကြွရင်း တီးဝိုင်းပေါင်းစုံနဲ့
ဟိုတယ်တွေလည်း ရှိနေပါပြီ ။
အဲ…အဲ…ဗျ….. ရေကြည်နေပီး သဘာဝအတိုင်း စီးဆင်းနိုင်သေးတဲ့ ချောင်းလေးပါလားးး
ကျနော်တို့ဘက်က နယ်သူနယ်သားတွေ အားထားရတဲ့ ချောင်းကြီး တစ်ခုကတော့ ချောင်းဖျားက ရွှေလုပ်ကွက်တွေကြောင့် တစ်နှစ်ပတ်လုံး နောက်ကျိနေတာ ကြာလှပေါ့… လွှတ်တော်မှာ တင်ပြတော့ နယ်မြေငြိမ်းချမ်းမှု မရှိသေးသဖြင့် သွားရောက်ပီး မစစ်ဆေးနိုင်သေးပါဆိုပဲ.. နယ်သူနယ်သားတွေ လက်မှတ်ရေးထိုးပီး တင်ကြတော့လည်း ဘာမှ..ဘာမှ..ဘာမှ…မထူးခြားးးးး ကိုဆာမိရေ.. သံတောင်ချောင်းလေးလည်း ယခုလိုပဲ…ဆက်လက်ပီး စီးဆင်းနိုင်ပါစေလို့ ဆုတောင်းတယ်ဗျို့…
တခါတလေ အထက်ကဆရာသမားများလုပ်ပုံမဟုတ်တာနဲ့ဘဲ တစ်ခုခုထူးလြားတာလေးများ
မပြောပြရဲအောင်ပါပဲ။ ငယ်ငယ်ကဆို နယ်မှာ ရေတွင်းတူးရင်တောင်မှ နက်နက် မတူးဝံ့ဘူး
မတော် နိုင်ငံတော်သဘောကျတဲ့ဟာတွေထွက်လာရင် ဖယ်ပေးရမှာဆိုပြီး ကြံဖန်ကြောက်ခဲ့ရသေးဗျာ
ဘာတဲ့ အပေါ်မှာ ကိုထူးဆန်းပြောထားတာ CB သဌေးယူလိုက်ပြီဆိုတော့နောက်ဆို အလကားသွားလို့မရတော့ဘူးဗျို့
ဟိုအညာသား ၆မျက်နှာကို ချောင်းထဲ ရေမွန်းအောင်လုပ်ပစ်လိုက်:)
သွားချင်လိုက်တာ .. တကယ် . တကယ်..
မြို့ပြကနေ ခဏလောက် ထွက်ပြေးရင်းပေါ့…
ကိုရင်ဆာမိ ဓာတ်သေတွေကြည့်ပြီး ကျောင်းသားဘဝကို လွမ်းလိုက်တာဗျာ…
ပသိချောင်းတော့မဟုတ်ပေမည့် ကွင်းဆင်းရင်း စမ်းချောင်းတွေ့ရင် ရေချိုး ၊ ထမင်းချက်…
အခု အဲသည့်ဘဝကို ငွေတွေပုံပေးတောင် မရတော့ဘူး…
ဖြစ်သေးတယ်နော ဟဲ ဟဲ
တကယ်တော့ … အဲဒီလိုပြန်သွားခွင့်ရမယ်ဆိုရင်တောင်မှ ကြံ့ခိုင်ရေးက ကောင်းတော့မယ် မထင်
မြတ်စောညီနောင်ဘုရားမှာ နှစ်စဉ် နိဗ္ဗာန်ဈေးသွားလှူတတ်တဲ့ မိတ်ဆွေတွေပြောပြတော့ ရောက်ဖူးချင်မိတယ်။
သံတောင်ကလည်း ဒုတိယ မေမြို့လို့ ကြားဖူးတယ်။
ဖြူနှင်းသော်ဆိုတဲ့ စာရေးဆရာမ(ကျမစိတ်ထင် အဲဒါ စာရေးဆရာတယောက်က နာမည်ခံရေးပေးတာထင်ပါတယ်)ရေးတဲ့ ၀တ္ထုတွေထဲမှာ အဲဒီ လိပ်သို၊ ဘောဂလိ၊ဘောခါ ဆိုတဲ့ ဒေသတွေကို အခြေတည်ပြီး ရေးတတ်တယ်။စုံထောက်ဝတ္ထုကောင်းတွေပါ။
အဲဒီဝတ္ထုတွေ ဖတ်ပြီး ရောက်ဖူးချင်တယ်။
နန်းတော်ရာသူကို အားကိုး၊ဦးဆာမိကို ခေါင်းတပ်ပြီး ရွာသူားတွေ လေ့လာရေး အမည်ခံသွားကြရအောင်။
မြတ်စောညီနောင်ဘုရားကတော့ တောင်ငူရာဇဝင်တွေနဲ့ပတ်သက်နေတဲ့ဘုရားပေါ့ ။
ခက်တာက ကျနော်တို့ဘိုးဘေးတွေရဲ့အားနဲချက်က မှတ်တမ်းမှတ်ရာ သေချာမထားခဲ့တာပါပဲ ။
ပါးစပရာဇဝင်တွေနဲ့မူအမျိုးမျိုးကွဲနေတာမို့ ကျနော်လည်း အခုထိ ရေရာစွာ မသိသေးပါဘူး ။
သို့သော်လည်း တပေါင်းလပြည့် ထင်ရဲ့ ……အဲဒီဘုရားပွဲကတော့အတော်စည်ပါတယ် ။
အစ်မပြောတဲ့သံတောင်ကတော့ သံတောင်ကြီးလို့ခေါ်ကြတဲ့မြို့ပါ ။
တပ်မတော်ကအရာရှိများကို မွန်းမံသက်တန်းပေးဖို့ ဖွင့်ထားပါတယ် ။
အရင်ကတော့ဘနယ်မြေအခြေအနေအရမသွားနိုင်ပေမယ့် အခုလမ်းဆိုးသော်လည်းသွားလို့ရပါပြီ ။
မောင်ဂီ လည်း ကျနော်နဲ့တစ်နေ့တည်း ပသိချောင်းကိုရောက်လာပြီး အဲဒီသံတောင်ကြီးကို
သူကတော့ လက်ရှိအခြေအနေကို အသိဆုံးပါပဲ
နီးနီးလေး နဲ့ ဝေးနေတာပဲ…။
နီးလျှက်နဲ့ဝေး ……… ဆုံနိုင်ဖို့တွေးနေရင်တော့ ဟဲဟဲ
သွားမယ်ဆို လက်တို့လိုက်ဗျာ ကိုနိုဇိုကြီးပါ ခေါ်သွားရမယ်
သူလဲ အဲ့ဒီဒေသနဲ့ အကြောင်းပါသဗျ